संकटको समयमा कसरी हुन्छ क्रिकेट?
नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ ११, २०७७, १३:५६
काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को माहामारीबाट बाहिर निस्कन र सामान्य जीवनमा फर्कन खेल गतिविधिहरु पनि सुरु हुन थालेका छन्। यसैले अहिलेको परिस्थितिमा क्रिकेट सुरु गर्दा पालन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)ले केही नियम बनाएको छ।
संकटको समयबाट अगाडि बढ्दै गर्दा विभिन्न घरेलु क्रिकेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलसम्म कसरी खेलाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा आइसिसीको चिकित्सकीय सल्लाहकार समितिले केही नियमहरु बनाएको हो।
उक्त निमयहरुले खेल कहिले सुरु गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केही नबताए पनि खेल सुरु हुँदा कसरी गर्ने भन्ने खाँका कोरेको छ। आइसिसीले आफूसम्बद्ध सबै देशहरुलाई उक्त निमयको पालना गर्नसमेत भनेको छ।
खेलको दौरान मैदानमा हुने सबैको पहिले नै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को परीक्षण गरिने बताइएको छ। यदि कसैमा खतरा देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। खेलाडीसँगसँगै विशेष गरी अम्पायर र अन्य पदाधिकारीले पनि यी सबै नियमको पालना गर्नुपर्ने आइसिसीले जनाएको छ।
यी केही आइसिसीले पालन गर्नुपर्ने नियममा राखेका महत्वपूर्ण विषयहरु हुन्। जसलाई कुनै पनि देशमा क्रिकेट हुँदा उक्त देशको सरकारले भनेका नियमका साथै यी निमयहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अभ्यासका दौरानमा पनि खेलाडीहरुलाई धेरै समय अभ्यासमा नबिताउन भनिएको छ। विशेष गरी बलरहरुका लागि कामको चाप पर्ने हुँदा उनीहरुले निश्चित समयका लागि मात्र अभ्यास गर्नुपर्ने बताइएको छ।
विशेष गरी लामो समय खेलबाहिर रहेकाले एक्कासी अभ्यासमा फर्कंदा बलरको हड्डीमा समस्या आउन सक्ने खतरा रहेको समेत बताइएको छ। यसैले खेलका लागि जाँदा अतिरिक्त खेलाडीको संख्या बढाउन पनि भनिएको छ। खेलमा जानुअघि बलरका लागि टेस्ट क्रिकेटका लागि आठदेखि १२ हप्ता, एकदिवसीयका लागि ६ हप्ता र टी २० का लागि पाँचदेखि ६ हप्ता अभ्यास गर्नुपर्ने बताइएको छ।
गएको बिहिबारदेखि इंग्ल्याण्डले क्रिकेट अभ्याससमेत सुरु गरिसकेको छ। जसमा १८ जना बलर सामेल छन्। वेस्ट इन्डिजसँगको तीन खेलको टेस्ट सिरिजका लागि इंग्ल्याण्डले अब कम्तिमा सात हप्ता अभ्यास गर्नेछ। सिरिज जुलाई ८ मा सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। अहिले श्रीलंकाले पनि अभ्यासको तयारी सुरु गरिसकेको छ।
आइसिसीले यस्ता नियमहरु ल्याए पनि खेलाडी नै भने यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी खेल्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। बंगलादेशका अनुभवी क्रिकेटर सकिब अल हसनले सार्वजनिक रुपमा नै अप्ठ्यारो समयका कसरी सुरक्षित रुपमा खेल्ने भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
‘अहिले सुनिएअनुसार कोरोना भाइरस १२ फिटको दुरीसम्म सर्न सक्छ, त्यसो हो भने दुई ब्याट्सम्यानले ओभरको बीचमा कुराकानी गर्न नहुने हो? उनीहरु आफ्नै क्रिजपट्टी बसिरहनु पर्ने हो? स्पीन बलिङमा पनि विकेटकिपर विकेटको नजिकै बस्नु नहुने हो? फिल्डरहरु नजिकै बस्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने? कतिपय विषयहरु छलफल गर्न बाँकी नै छ’ सकिबले भनेका छन्।
सकिबले हरेक विषयमा विश्वस्त नभई आइसिसीले खेल गर्ने अनुमति दिन पनि नहुने बताएका छन्। ‘मलाई लाग्छ सबै कुरामा यकिन नभइ आइसिसीले खेल गर्ने अनुमित दिने छैन। अवस्था जेसुकै होस् पहिले त जीवन नै आउँछ, त्यसैले मलाई लाग्छ स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कुरामा विचार गरिने छ’ उनले भनेका छन्।
अहिले क्रिकेटबाट एक वर्षको प्रतिबन्धमा रहेका सकिबले आफू मैदान फर्कन पाउने दिन गनेर बसिरहेको पनि बताएका छन्।